आजको वलय सूर्यग्रहणमा के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ? – Karnalisandesh
आजको वलय सूर्यग्रहणमा के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ?
प्रकाशित मितिः १० पुष २०७६, बिहीबार १०:१६ December 26, 2019
काठमाडौँ। आज वि.सं.२०७६ पौष १० गते नेपाली समयअनुसार बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटमा सुरु भई ११ बजेर ३१ मिनेटमा समाप्त हुने वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण एक दुर्लभ घटना हो, जुन समयमा पृथ्वी, चन्द्रमा र सूर्य एउटै सरलरेखामा पर्दछन्। आजको खण्डग्रास सूर्यग्रहणमा अर्को महत्वपूर्ण घटना पनि घट्दैछ, त्यो हो पृथ्वीसहित छ वटा ग्रहहरु सूर्यसँग एउटै सरलरेखामा लाइनबद्ध भई रहनेछन्। तर, यो घटनाका बेलामा पृथ्वीमा प्रलय हुने, ठूला प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तो भूकम्प जाने, बाढी–पहिरो आउने, अनिकाल पर्नेजस्ता घटना घट्ने हल्लाहरुमा कुनै वैज्ञानिक कारण छैन।
वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहणको बेला प्रत्यक्ष देखिने चन्द्रमाको पूरै व्यास सूर्यको प्रत्यक्ष देखिने व्यासभन्दा केही सानो हुन्। त्यसैले चन्द्रमाको परिधिले सूर्यको प्रत्यक्ष सतहलाई पूरा नछेकी छेउतिरको पातलो धागोजस्तो मसिनो गोलाकार भाग छोडिएको हुन्छ, जुन भाग चम्किलो नै हुन्छ। झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सूर्यको सतह छेकिने भएकोले वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहणको बेला पृथ्वीमा लगभग अन्धकार नै हुन्छ। तर, यस्तो दृश्य चन्द्रमाको सघन छायाँ परेको पृथ्वीका थोरै क्षेत्रहरुमा मात्र देखिने हुन्छ,बाँकी चन्द्रमाको विरल छायाँ पर्ने पृथ्वीको ठूलो क्षेत्रमा भने अन्य बेलाका खण्डग्रास सूर्यग्रहणमा जस्तै केही मधुरो प्रकाशको दिन हुन्छ।
आजको वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपालबाट देखिँदैन। नेपालबाट अन्य बेलाको जस्तै सामान्य प्रकारको खण्डग्रास सूर्यग्रहण मात्र देखिनेछ। करिब ४० प्रतिशत सूर्यसतह मात्र ढाकिएको खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपालबाट देखिनेछ। वलय खण्डग्रास सूर्यग्रहण अरब प्रायद्वीपबाट सुरु भई अरबको खाडीलाई पार गरी दक्षिण भारतलाई छोएर गई प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने पातलो आर्क आकारको रेखीय क्षेत्रमा मात्र देखिनेछ।
सूर्यबाट हानिकारक विकिरणहरु अत्यधिक मात्रामा उत्सर्जित हुन्छन्। त्यसैले ग्रहणको समयमा नाङ्गो आँखाबाट सूर्यलाई हेर्नु हुँदैन। पराबैजनीलगायत हानिकारक विकिरणहरु छेक्ने विशेष प्रकारको चस्मा लगाएर मात्र सूर्य ग्रहण हेर्न सकिन्छ। हानिकारक विकिरण आँखामा परेमा ज्योति गुम्ने सम्मको जोखिम हुन्छ।
सूर्यको प्रकाश केही मधुरो हुने र हावाको तापक्रम केही मात्रामा अधिकतम ३ डिग्रीसम्म घट्न सक्छ। त्यस्तै गरी हावाको बहावमा केही बदलाव आउन सक्छ। तर, यसले जनजीवनमा उल्लेख्य असर गर्दैन। जनावरहरुको गतिविधि एवं व्यवहारमा केही फरकपना आउन भने सक्छ। सोलार तथा हावाको ऊर्जा प्रयोग गरी बनाइएको विद्युत गृहबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा केही कमी आउन सक्छ।
कर्णाली सरकारद्वारा सुरक्षा रणनीति र पर्यटन गुरुयोजना स्वीकृत
डा.रंगीनाको नेतृत्वमा बिना चिरफार सिष्टको सफल शल्यक्रिया